Golaha Ammaanka oo warbixin kasoo saarey xaaladda Soomaaliya
Posted On 21-05-2020, 11:26PM
MUQDISHO, Soomaaliya – Xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa waxay soo dhaweeyeen guulihii laga gaarey dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose.
Howlgaladaas waxaa si wadajir ah u fulinaya Ciidamadda Xoogga Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Ciidamada huwanta ah oo taageero dhanka cirka ah ka helaya diyaaradaha Mareykanka ayaa la wareegay degaano uu Awdheegle ku jiro.
Dhaqdhaqaaqyadda waa kuwa wali socda, wallow uu hoos u dhac ku keenay safmarka Coronavirus, kaas oo xaalado dhowr ah laga helay dalka.
Balse, xubnaha golaha ammaanka ayaa walaac xooggan ka muujiyey in ciidamada ammaanka Qaranka loo adeegsado loolanka siyaasadeed ee maamul goboleedyadda Jubaland iyo Galmudug.
Xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedeysan in ay ciidamo ku daad-gureysay gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay ku fashilantay in ay farageliso doorashadii madaweynaha.
Ciidankaas oo wali ku sugan gobolka waxaa lagu waramay in ay ka shaqeynayaan siddii ay halkaas uga dhisi lahaayeen maamul kale.
Dhanka Galmudug, dowladda federaalka ayaa lagu dhaliilay in ay awood ciidan u adeegsatay siddii ay meesha uga saari lahayd Ahlu Sunna.
Dhanka kale, xubnaha golaha ammaanka ayaa carro ka muujiyey hakadka ku yimid wadaxaajoodyadda dowladda federaalka iyo maamuladda.
Mareykanka ayaa ka codsaday madaxweyne Farmaajo in uu qabto Shirka Ammaanka Qaranka kaas oo ay isugu yimaadaan hogaamiyeyaasha dowladda federaalka ah iyo maamulada dalka.
Baaqaan ayaa kusoo hagaagaya xilli dalka uu cagaha la galayo xaalad kala guur ah isla markaana aanan wali lagu heshiin nidaamka doorashooyinka 2020-21 lagu galayo, taas oo xoojisay shakiga muddo kororsi.